Tetikasa tetik'asa | Reef Resilience
Raha vantany vao nanapa-kevitra ianao fa ny tranokalanao dia kandidà tsara ho an'ny famerenana amin'ny laoniny (izany hoe, manana traikefa lehibe ny fahombiazan'ny fahita lavitra ny mpandidy coral), ny dingana manaraka dia ny mamantatra ny tanjon'ny programa famerenana amin'ny laoniny. Ireo tanjona ireo dia tokony havoitra sy heken'ny mpiara-miasa rehetra rehetra alohan'ny hanombohan'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny famaritana ny tanjonao dia afaka manampy amin'ny fanazavana hoe nahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fijerena hetsika hafa momba ny fitantanana ary manazava ny antony inoanao fa tsy ho tafavoaka ara-boajanahary ny tranonkala ary mila fampiasam-bola sy loharanom-bola fanampiny. Ity dingana ity dia afaka manampy amin'ny famantatra ny fomba famerenana amin'ny laoniny hampiasaina, ny vidiny takiana, ireo mpandray anjara hiara-miasa, ary ny fizotry ny fotoana sy ny haben'ny famerenana amin'ny laoniny.
Ny tanjona fototra amin'ny famerenana amin'ny laoniny dia ny fampiroboroboana ny fahasamihafan'ny zavamaniry sy ny habetsaky ny karazana vatohara mifandraika amin'ny trondro. Sary © Jeff Yonover
Ny fandaharan'asa famerenana amin'ny laoniny dia tsy mitovy amin'ny tanjon'izy ireo, ka mety mitaky fomba hafa. Ny tanjona dia mety ho biolojika, sosialy-ekonomika, na izy roa. Ity manaraka ity ny lisitr'ireo tanjona voatanisa tamin'ny fandaharan'asam-bokatra tamin'ny famerenana ny haran-dranomasina teo aloha:
Mampiroborobo ny fahasalaman'ny biodiversité
Mampitombo ny biomass sy ny vokatra avy amin'ny karazana biby manan-karena
Manampy ny fanarenana ny karazam-borona manan-danja (ohatra, ny vatohara fananganana vatohara) na ny fizotran'ny ecosystem (ohatra, ny famerenana ny vatohara)
Fanimbazimbana ny fahasimbana na ny fanimbana ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina, ohatra avy amin'ny fivoarana izay miantraika amin'ny kolikoly
Ireo tanjona socioeconomic
Manangana ny fanentanana ampahibemaso sy ny fanabeazana momba ny tontolo iainana mba hampitombo ny fankasitrahana eo an-toerana ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina
Fampandrosoana fivelomana hafa (toy ny kolotsainan'ny vokatra akoholahy, fizahan-tany) hampihenana ny fampiasana ny harena amin'ny haran-dranomasina
Fampitomboana ny tolotra ara-tsosialy ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana, toy ny fiarovana ny morontsiraka
Ny famaritana sy ny famaritana ny tanjona voafaritra dia dingana mavesa-danja amin'ny dingana famolavolana satria ny fahombiazan'ny tetikasa na ny fahombiazana dia tsy azo valiana raha tsy misy azy ireo. Ny zava-kendreny dia tokony hitarika amin'ny taranjam-pandaminana marim-pototra na azo refesina, izay manombana tsara ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny. Ny fakana fotoana mba hametrahana zava-kendreny koa dia manampy amin'ny fanamarinana ny vokatra ara-tontolo iainana tsy misy fialam-boly na fanantenana izay mety hitarika ny tetikasa tsy hahomby. Farany, ny fametrahana ny tanjona azo trandrahana sy ny fanombanana ny fahombiazan'ny tetikasa dia hanampy amin'ny fitantanana ny fitantanana.
Ny fandraisan'andraikitry ny mpandray anjara
Alohan'ny hahatanterahana ny tanjona dia tokony hifanaraka amin'ny tanjon'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny ny mpandray anjara rehetra. Izany dia afaka manampy amin'ny fananganana fifanarahana eo amin'ireo mpiara-miasa eo amin'ny tetikasa ary mety hanampy amin'ny fanalàmana ny fifanoherana mety hivoatra. Ankoatr'izay, ny fanombantombanana ireo loza mety hitranga amin'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny (ohatra, avy amin'ny oram-batravatra na ny hafanam-po mafana avy amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro) dia afaka manampy ny mpandray anjara hanana fanantenana kokoa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ary manao dingana hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny vokatra famerenana amin'ny laoniny.
Ny fanarenana voajanahary momba ny haran-dranomasina momba ny haran-dranomasina dia manjaka an-taonany maro, noho ny fitomboan'ny haran-dranomasina maro sy ny haben'ny vatan'ny fiterahana. Araka izany, ilaina ny zavatra andrasana eo amin'ny fotoana haharetan'ny vatohara hahasitrana. Amporisihina ny tanjona farany amin'ny famerenana ny famerenana amin'ny laoniny 5-10 taona aorian'ny fambolena, miaraka amin'ny tanjona miadivana eo anelanelan'ny fikajiana ny fandrosoana amin'ny fotoana sy manao fanitsiana ilaina. Ireo tanjona voafetra sy voafaritra tsara ireo dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny drafitra fanaraha-maso.